décembre 2014 – filazantsaramada
Fivoriana savaranonando Araka ny efa voalaza teo aloha dia fiaraha-miombon’antoka (na “partenariat”) eo amin’ny Fiangonana iray sy ny FF no endrika isehoan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta izay atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “fampitaovana ny olona masina”. Ho an’ny taom-piasana 2014/2015 dia nisy fivoriana sava ranonando nataon’ny FF niaraka tamin’ireo Fiangonana mpiara-miasa FJKM avy ao amin’ny SPAA […]
Publié parfilazantsaramada décembre 23, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana / Feon’ny Filazantsara (FF)
ENGA ANIE; HO MAHATOKY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA!
« Misy Anankiray Izay manambara Ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany Ahy. » (Jaona 5:32) Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Raha mbola manana tombon’andro izaho sy ianao ka tratry ny anio, dia ohatra an’ireny olona tena mahatoky eo amin’Andriamanitra ireny èry! Toa ohatra ny olona tsy nanao hadisoana fa mendrika sy […]
Publié parfilazantsaramada décembre 19, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ENGA ANIE; HO MAHATOKY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA!
Fanolorana diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Baiboly Ifandraisana
Miorena tsara, aza miova Ny Alahady 14 Desambra 2014 lasa teo, nandritra ny fanompoam-pivavahana; no nanolorana ny diplaoma ho an’ireo mpianatra fito ambinin’ny folo nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) tao amin’ny FJKM Tranovato Andafiavaratra (SP Iarivo Avaradrano). Tsy nitsahatra nanentana ireo kristiana ny hiroso hatrany amin’ny fandalinana ny tenin’Andriamanitra (ilay Teny Fiainana) Rtoa […]
Publié parfilazantsaramada décembre 18, 2014 décembre 18, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fanolorana diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Baiboly Ifandraisana
Fiaraha-miobon’antoka amin’ny Fiangonana
Ho fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny asa sahaniny ary ho fanamafisana ny fiaraha-miasa efa misy ary miha-mivelatra amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia nisy ny fihaonana teo amin’ny Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo (SPAA 11), Atoa RABELISON Harimanitra Manassé, Mpitandrina sy ny Talen’ny FF, Atoa ANDRIANASOLO Jaona ary ny Tompon’andraikitry ny Programa, […]
Publié parfilazantsaramada décembre 12, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miobon’antoka amin’ny Fiangonana
MIOMANA AMIN’NY FIHAVIAN’I JESOSY KRISTY ISIKA
« Ary nankany amin’ny tany rehetra any amoron’i Jordana izy nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka; Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra (Isa. 40. 3-5) ». (Lioka 3:3,6) Miresaka an’i Jaona mpanao batisa isika eto am-piandohana, satria izy no iandohan’izao resaka eto amin’ny Lioka toko faha 3 izao. Tonga taminy, tany an’efitra ny tenin’Andriamanitra araka ny […]
Publié parfilazantsaramada décembre 12, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIOMANA AMIN’NY FIHAVIAN’I JESOSY KRISTY ISIKA
EFA AO ANATINAO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA.
«Ary Jesosy, nony nanontanian’ny Fariseo izay andro hihavin’ny fanjakan’Andriamanitra, dia namaly azy hoe: Tsy misehoseho ny fihavin’ny fanjakan’Andriamanitra. Fa tahaka ny helatra manelatra hatramin’ny faravodilanitra ka mahazava hatramin’ny farany koa, dia ho toy izany ny Zanak’olona amin’ny androny.» (Lioka 17: 20, 24) Advento, fotoana fiomanana sy fiandrasantsika ny fahatongavan’i lay Kristy ny andro toy izao. […]
Publié parfilazantsaramada décembre 5, 2014 décembre 5, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur EFA AO ANATINAO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA.
Handroso sy hiely hatrany ny tenin’Andriamanitra Ho tohin’ny fihaonan’ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) tamin’Atoa RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa, Mpitandrina, FJKM Atsimon’i Mahamasina, amin’ny fiaraha-miasa azo atsangan’ny roa tonta dia nanao fanentanana mikasika ireo sehatr’asa vokarin’ny FF izy ireo ny Alahady 30 Novambra 2014. Namporisika sy nanentana ireo kristiana handroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana […]
Publié parfilazantsaramada décembre 5, 2014 décembre 12, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana